साहित्य सिर्जनाः भिख मागे सरि माया पाइन्नझै लाग्न थाल्यो ! - Everest Dainik - News from Nepal
साहित्य सिर्जनाः भिख मागे सरि माया पाइन्नझै लाग्न थाल्यो !
पुग्यो अब तिम्रो साथ चाहिन्नझैं लाग्न थाल्यो
भिख मागे सरि माया पाइन्नझैं लाग्न थाल्यो ।
थोरै मात्र समय पनि, मेरो लागि हुन्न भने
जबरजस्ति भयो माया, नगरुझै लाग्न थाल्यो ।
ख्याल–ख्यालमै बसि गयो, कति मिठो पिरति यो
त्यो अनुहार लुकीलुकी, नहेरुझै लाग्न थाल्यो ।
याे पनि पढ्नुस सुष्मा स्वराज भ्रमणले शीतल निवासमा बिहे सम्झायो !
मन रुन्थ्यो आसु झर्थ्यो, ती हातले पुछिदिने
देखावटी माया रैछ पुग्यो, नगरुझैं लाग्न थाल्यो ।
ट्याग्स: bidhya bhandari